Vivo Nex iyo Nex S: Tilmaamaha iyo Naqshadeynta oo soo daatay | Androidsis
Muddo dhowr toddobaad ah ayaa wararka xanta ah ay ka soo baxayeen taleefannada cusub ee Vivo ee dhamaadka-sare. Isla todobaadkan Waxaa horeyba u suurtagashay in la xaqiijiyo magaca labadan nooc, Vivo Nex iyo Nex S. Hadda, dhowr maalmood ka dib, sifooyinka labada taleefan ee soo saaraha Shiinaha ayaa si qalad ah u soo baxay. Maadaama astaanta lafteeda ay ku dhejisay labada nooc ee boggeeda internetka.
Sidan oo kale, Waxaan horeyba u haysanay fikrad cad oo ku saabsan waxa aan ka filan karno kuwan Vivo Nex iyo Nex S kaas oo soo saaraha Shiinaha uu dhawaan suuqa soo gelin doono. Laba talefan oo ay ku cusboonaysiiso kala duwanaanshiyaha ugu sarreeya.
12-ka June ayaa la filayaa in si rasmi ah loo soo bandhigo. Laakiin dhowr maalmood ka dib bandhiggan waxaan horey u awoodnay inaan ogaano waxa moodooyinkani noo diyaariyeen. Diyaar ma u tahay inaad aragto Vivo-ga sare ee cusub?
1 Tilmaamaha Vivo Nex
2 Tilmaamaha Vivo Nex S
Tilmaamaha Vivo Nex
Marka ugu horeysa waxaan helnaa qaabka magaciisa ku siinaya noocyadan cusub ee shirkadda Shiinaha. Taleefanka buuxiya waxyaabaha gaarka ah ee la faafiyay maalmo ka hor. Markaa waxay naga tagtaa dareen wanaagsan waxayna muujinaysaa horumarka astaanta Shiinaha ee arrintan. Kuwani waa tilmaamaha Vivo Nex:
Screen: 6.59 inji oo leh xallinta 2316 × 1080 pixels
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 845
Cámara trasera: laba 12 + 5 MP
Kaamirada hore: 8 MP oo leh flash LED
Batariga: 4.000 mAh
Nidaamka hawlgalka: Android 8.1 Oreo leh Funtouch 4.0 oo ah lakab qaabeyn ah
Xuduudaha kala duwan: 4G LTE, USB C, Bluetooth 5.0
Cabbirada: 162 x 77 x 7.98 mm
kuwa kaleDareemaha sawirka faraha ee lagu dhex dhisay shaashadda
Waa nooc awood leh, kaas oo ka baxa sifooyinka ugu dhammaystiran. Processor-ka ugu fiican suuqa ee telefoonka, oo ay la socoto RAM weyn, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee aan aragno maanta. Waxa intaa dheer in ay sidoo kale leedahay meel wax badan oo kayd ah. Markaa tani dhib kuma noqon doonto Vivo Nex.
Haddii ay jiraan wax dhaleeceyn ah, waxay ku jiri lahayd kamaradaha. Tan iyo markii loogu talagalay telefoonka ku jira kala duwanaanshaha kamaradaha waxay u muuqdaan inay ka tagaan wax la rabo. In kasta oo ay ku sharadayso kamarad labanlaab ah oo dhabarka ku taal, waa kamarad badan oo aan ku aragno taleefannada dhexdhexaadka ah. Ugu yaraan haddii aan aragno in ay tahay 12 + 5 MP. Sidoo kale hore ayaa ka baxa wax yar oo la rabo.
Haddii kale, Tani Vivo Nex waxay u taagan tahay baytari weyn, kaas oo shaki la'aan u ballan qaadaya inuu siin doono madax-bannaani badan isticmaalayaasha iibsanaya. Intaa waxaa dheer, waxay noo timaaddaa nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka ee asalka ah. Markaa ma jiraan wax badan oo laga cabanayo arrintan. Waxa kale oo ay u taagan tahay in la haysto dareeraha faraha isku dhafan ee shaashadda. Waxay u muuqataa in sharadkan uu sii xoogaysanayo.
Tilmaamaha Vivo Nex S
Midka labaad ee moodooyinka waxaa lagu qeexi karaa sida telefoon aad ugu habboon qiimaha dhexe ee dhexdhexaadka ah. Naqshadaynta qalabku waxay la mid tahay kii hore. In kasta oo aan ku kala duwannahay sida processor-ka, kaas oo shaki la'aan uu leeyahay arrin la taaban karo oo ku saabsan kiiskan. Maadaama ay tahay tallaabo dib-u-dhac ah, inkastoo tani ay ka dhigayso qaabkan mid dhaqaale badan. Kuwaasi waa Tilmaamaha Vivo Nex S:
Screen: 6.59 inji oo leh 2316 × 1080 xallin
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 710
Cámara trasera: labanlaaban 12 + 5 MP
Xuduudaha kala duwan: 4G LTE, USB C ...
kuwa kaleDareenka faraha ee dhabarka
Farqiga kaliya ee nakhshadeynta ayaa ku jira dareenka sawirka faraha. Habka-dhamaadka sare waxa lagu daraa shaashadda, halka tani ay calaamad u dooratay ikhtiyaarka caadiga ah. Waxay dhigaan gadaasha aaladda. Inta soo hartay, waxaa jira farqi u dhexeeya RAM, tiro yar kiiskan. Laakiin inta soo hartay waa isku mid marka loo eego Vivo NEX.
Wali wax la taaban karo lagama oga qiimihiisa. Mar haddii taas la ogaaday Vivo NEX waxay lahaan doontaa qiimo dhan 9.999 yuan, taas oo noqon doonta qiyaastii 1.300 euro. Laakiin waxay u muuqataa qiimo xad dhaaf ah. Juun 12 waxaan ogaan doonaa qiimaha taleefanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Shaandheeyey qeexitaanka Vivo Nex iyo Nex S